Accueil > Gazetin'ny nosy > Rolly Mercia: Hanagadra an’i Lola Rasoamaharo ?
Rolly Mercia: Hanagadra an’i Lola Rasoamaharo ?
Namatrapatratra aoka izany omaly atoandro ny minisitra ny Serasera, Harry Laurent Rahajason Rolly Mercia raha nivahiny tao amin’ny Radio Antsiva. Ankoatra ny fiarovany ny fitondram-panjakana momba ny lalàm-pifidianana sy ny manodidina an’io dia nasiany resaka koa ny momba ilay taratasy fampitandremana (lettre de mise en demeure) miendrika fampihorohoroana sy fandrahonana navoakany ny talata teo ho an’ny haino aman-jery sy ny gazety an-tsoratra amin’ny ankapobeny tsy miankina amin’ny fanjakana. Nambarany moa fa « efa niezaka niala nenina izy nitsinjo ny maha-mpiray asa, satria mpanao gazety koa ny tena talohan’ny naha-minisitra », hoy izy, «fa rehefa vita izay dia ny dingan’ny fampiharana ny lalàna amin’izay no atrehina».
Dia noraisiny ho ohatra ny raharaha nahabe resaka momba an-dramatoa Depiote Robertine Rabetafika tamin’ilay resaka « maimbo helika » sy ny fiparitahan’ny sary miboridan’ity olom-boafidy ity nivoaka gazety.
Na tsy nanonona anaran-gazety aza i Rolly Mercia omaly dia nivantana ny tiany hambara hoe “lohatenin-gazety an-tsoratra teto, izay hitam-poko hitam-pirenena hatreny Andravoahangy ka hatreny Besarety sy Anosibe, ny hoe Depiote Rabetafika Robertine: Mpivaro-tena”. Tsy iza akory fa ity La Gazette de la Grande Ile ity no namoaka izany.
Asa aloha amin’Ingahy Rolly Mercia, minisitra « manam-pahaizana faran-tampony amin’ny raharahan-tserasera sy fanaovan-gazety », ary havanana amin’ny fandrahonana sy fampihorohoroana, ny antsoina hoe “mivaro-tena”, fa aminay, ny olona mandray vola ka manao zavatra tsy mifanandrify amin’ny soatoavina sy moraly dia efa mahavoafaritra an’izany. Etsy an-kilany, ny fanazavana nataonay teto amin’ity gazety ity dia ny fivarotan-tenan’io depiote io amin’ny lafiny pôlitika, satria dia tonga amin’ilay fitenenana hoe « sakaizan’ny mpandresy » izy, satria ny fitondrana nifandimby teto no noteteziny niarahany : Tim, TGV, MMM, HVM… Ka asa na diso na mba manana ny rariny ihany izahay raha miteny hoe «mpivaro-tena» amin’izany. Mpamadika palitao koa moa no filazan’ny olona sasany azy. Ary ankoatra io, ako sy feo avy amin’ny mpiasan’ny Antenimierampirenena sy ny solombavambahoaka sasany no nahenoana tamin’iny andro niteraka savorovoro momba ny « maimbo helika » iny hoe « misy hatramin’ny fitondran-tena tsy maotina ange eto amin’ity lapan’i Tsimbazaza ity ary voateny mihitsy aza ny depiote sasany, na lahy na vavy ».
Fa mbola ity gazety La Gazette de la Grande Ile ity koa no namoaka ny vaovao momba ilay volabe 12 miliara voalaza fa very tao an-tranon’ny Praiminisitra, izay misy milaza fa isan’ny mety hitorian’ingahy Praiminisitra ny namoaka ireny vaovao nambarany fa tsy marina ireny. Toraka izany koa ny momba ny sary mamoa-fadin’ny depiote Robertine Rabetafika izay hita tany anatin’ny «Facebook ».
Ka ho lohalaharana hitory mba hanagadrana ny talen’ny famoahana sady mpanao gazetin’i La Gazette de la Grande ile, Lola Rasoamaharo amin’izany rehetra izany ve i Rolly Mercia ?
Dia hiaraha-mahita sy manaraka eo e !